Fanambarana: ny tsiambaratelon'ny harena lehibe nataon'i Harry sy Meghan Markle - teles relay
Fanambarana: ny tsiambaratelon'ny harena lehibe nataon'i Harry sy Meghan Markle
By TELES RELAY On Jona 18, 2020
Niharihary ny harena lehibe an'i Meghan Markle sy i Harry. Inty koa noho izany ny tsiambaratelon'ny hareny!
Tamin'ny volana Janoary lasa teo, nanapa-kevitra ny hiala ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka i Meghan Markle sy i Harry. A fanambaram-pahefana izay nahazo ny fanomezana an'i Angletera nahagaga.
Fialana amin'ny tsy fahatsorana, nisafidy ny tsy hitaky ara-bola intsony ny mpivady Sussex. Fanapahan-kevitra izay mety ho nanankarena vokatr'izany. Ary noho ny antony tsara!
Mankalazà ny Printsy Harry sy i Meghan Markle ny fanambadian'izy ireo 2 taona…
Ny printsy Harry sy Meghan Markle avy any Canada tamina fiaramanidina iray ...
Ilay Printsy Harry sy Meghan Markle nitsikera noho ny tsy niraharaha…
Mila i Meghan Markle sy i Harry dia mila mandoa ny fanavaozana ny Frogmore Cottage. fa manofa trano fonenany any Los Angeles koa izy ireo.
Indrindra fa nividy villa vaovao izy ireo. Ary tsy izay ihany! The ray aman-dreny avy amin'i Archie kely dia tsy maintsy mampiasa vola amin'ny fitsangatsanganana fiaramanidina manokana. Fa eo amin'ny fitaovana fiarovana ihany koa izay lafo!
Zavatra iray no azo antoka! Meghan Markle sy i Harry dia tsy mandany vola! Ka izay no nambara ilay fanadihadiana Meghan sy Harry: nafahana aleo izao alatsinainy 15 jona amin'ny TV BFM.
Meghan Markle sy Harry: ny tsiambaratelon'ny vintana lehibe nasehony!
"MEGHAN MARKLE TOKOA IZANY ENEO FARANY FARANY »
Niainga tampoka ny tsiambaratelon'ny vintana lehibe azony! Tokony ho fantatrao izany ny lohandohan'i wales dia tsy misalasala manampy ny mpivady.
Izany dia nambaran'i Bob Morris, mpampianatra ny lalàna ao amin'ny University College London: “Manana vola be izy. Il manome telo tapitrisa eo ho eo amin'i William sy Harry isan-taona. "
Ary maro kokoa! Prince harry mahazo vola be ihany koa izy taorian'ny nahafatesan'i Lady Diana reniny. "7 ka hatramin'ny 10 tapitrisa euro"
Zava-misy nambara tamin'ny mpanao gazety frantsay 24, Philip Turle. " Izany koa nandova ampahany tamin'ny vintana tamin'ny renibeny renibeny izay maty tamin'ny 2002. "
"Noho izany dia nahazo vola be izy rehefa miaramila izy heverina fa manodidina ny 25 tapitrisa euros izy io.«
Fa izay dia avy amin'i Meghan Markle, tsy ampy ny vola: " Izay dia voaloa be tsara nefa izy no mpilalao sarimihetsika ao amin'ny andiany Suits. "
“Nanao fisolo tena maro izy, ary nanana tranonkala media sosialy izy. izy mbola manana tombony eo amin'ny 5 tapitrisa euros.«
BundesLiga: Mainz nataon'i Kunde Malong dia nahagaga an'i Dortmund
Eto'o Fils: saika lanin'ny malalany ny sain'ny havany.
Cameroun: Depuis les incidents à l’hôtel Intercontinental en Suisse il y a un an,…